Rooney waa in uu dabeecadda wanaajiyaa - BBC Somali
Rooney waa in uu dabeecadda wanaajiyaa
8 Juunyo 2010
Image caption Rooney iyo garsoorihii ciyaarta saaxiibtinimo ee kooxda South Africa.
Garsoorihii dhexdhexaadinayay kulankii is diyaarinta ee England yeelatay, ayaa u digay Wayne Rooney in uu "xakameeyo dabeecadiisa" hadii kale uu seegi doono koobka adduunka oo bilaabanaya maalinta Jimcaha ah.
Rooney ayaa calaamadda digniinta loo taagay ciyaartii Isniinta oo England ay 3-0 uga badisay kooxda Platinum Stars, iyadoo garsoore Jeff Selogilwe uu sheegay in weeraryahanku uu isaga aflagaadeeyay oo uu adeegsaday "af xumo".
Selogilwe wuxuu yiri: "Waa in uu bartaa sida dabeecadda loo xakameeyo, ciyaaraha adduunka oo dhan, ayaa laga mamnuuci karaa."
Rooney, oo 24 sano jira, wuxuu raaligalin bixiyay ciyaarta kadib, isagoo shaarkiisa siiyay garsooraha.
Ciyaarta ay la yeesheen Platinum Stars ka hor, ayaa captain ku xigeenka kooxda England Frank Lampard wuxuu ka digay in anshaxa kooxdiisa ay garoonka ka muujiso in uu muhiimad gaar ah iyo saamaynba ku yeelan doono guusha ay ka gaari karaan tartanka.
Wuxuu kaloo diiday Rooney, oo laga saaray ciyaartihii adduunka ee 2006 markii uu ku istaagay difaaca Portugal Ricardo Carvalho, in ay dhici karto in mar kale dhaqan xumo looga saaro ciyaaraha.